Radio Masti 87.9 MHz कस्ती कन्या खोज्दै छन् मुख्यमन्त्री शेरधन राई ?
शेरधन राई कम उमेरमै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानी एमाले नेता मानिन्छन् । ०५६ मा भोजपुर–२ बाट निर्वाचित उनी कान्छो सांसदका रूपमा सिंहदरबार छिरे । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भोजपुरबाटै जिते । र, सञ्चारमन्त्री पनि भए । गत मंसिरमा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित उनले ३ फागुनदेखि प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन् । ४७ वर्षीय मुख्यमन्त्री राई अविवाहित छन् । राजनीतिक व्यस्तताका कारण विवाह गर्न ढिलाइ भएको बताउने उनी अब भने कन्याको खोजीमा छन् । चाँडै बिहे गरेर वृद्ध आमाबुवाको वर्षौंदेखिको धोको पूरा गर्ने उनको योजना छ । भावी जीवनसाथीको चित्र पनि उनले मनमा कोरिसकेका छन् । आफूले रोज्ने केटीको बानी, स्वभाव र बनावटबारे उनले नुनुता राईलाई बताएका छन् ।
लभलेटर थुप्रै आए, कहिल्यै प्रेममा परिनँ
वास्तवमा म विद्यार्थीजीवनमा एकदमै चर्चित थिएँ । शारीरिक बनावटको पनि चर्चा हुन्थ्यो । मेरो व्यक्तित्वलाई हेरेर पनि गर्लफ्रेन्ड छ भन्ने शंका–उपशंका गरिन्थे । तर, जीवनमा कहिल्यै लभ परेन । विद्यार्थीजीवनमा खेल र पढाइमा मात्र ध्यान हुन्थ्यो । कलेजमा आएपछि राजनीतिमा लागेँ । पढाइ र राजनीतिपछि बचेको अतिरिक्त समय खेल क्षेत्रलाई दिने भएकाले प्रेम गर्नेमा ध्यान नै गएन । तर, चिठीहरू भने धेरै आउँथे । ती चिठीको जवाफ कहिल्यै दिइनँ । खेल, पढाइ र राजनीतिले गर्दा महिला साथीहरूसँगको संगत खासै भएन । कोहीप्रति पनि आकर्षित भएको याद छैन ।
१४ वर्षमै विवाह गर्न दबाब
स्वाभाविक रूपमा उमेर पुगेपछि घरपरिवार वा आफन्तबाट विवाह गर्न दबाब आउँछ । तर, मेरो सवालमा अलि चाँडैदेखि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने दबाब आयो । १४ वर्षको हुँदा आमाबुवाले मेरो चिना देखाउनुभएछ । चिना हेर्ने मान्छेले ल अहिले विवाहको लगन छ, नत्र धेरै पछिसम्म हुँदैन भनेछ । त्यसपछि आमाबुवाले मेरो विवाह गर्ने तयारी गर्न थाल्नुभयो । म त्यसवेला नौ कक्षामा पढ्दै थिएँ । मैले तयारी देखेर थाहा पाएँ । अनि आमालाई ‘केको तयारी हो’ भनेर सोध्दा थाहा पाएँ । मैले ‘अहिले विवाह गर्दिनँ, पढ्छु’ भनेर जिद्दी गरेपछि विवाह रोकिएको थियो । त्यसपछि पनि उहाँहरूले विवाहका लागि दबाब दिइरहनुहुन्छ । तर, राजनीतिप्रतिको लगाव र जिम्मेवारीले अहिलेसम्म विवाह गर्ने फुर्सद मिलेको छैन ।
अब चाँडै विवाह गर्छु
अब चाँडै विवाह गर्ने सोच बनाएको छु । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको छु, अहिले जिम्मेवारीमा केन्द्रित छु । प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सबैसँग बसेर काम गरिरहेको छु । मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहेर प्रदेशलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराएपछि जीवनको पाटोलाई पूरा गर्छु । ७० वर्षको हाराहारीमा रहनुभएका आमाबुवाको चाहना पनि पूरा गर्नु छ । एक्लो छोरा भएकाले छिट्टै विवाह गरोस् भन्ने आमाबुवाको चाहना र रहरलाई पूरा गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारीलाई १ वर्षभित्र पूरा गर्ने विचारमा छु ।
जीवनसाथी खोजिसकेको छैन
म आफैँले मुख्यमन्त्री भएपछि विवाह गर्छु भनेको थिएँ । मेरो योजना पनि यही हो । तर, मुख्यमन्त्री भएपछिका जिम्मेवारी व्यवस्थित गर्नु पनि जरुरी छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर विवाह गर्ने हो । र, विवाहका लागि जीवनसाथी पनि खोजिसकेको छैन । अब खोज्नेभन्दा पनि सल्लाह गर्ने भन्न रुचाउँछु । विवाह गर्न एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न जरुरी हुन्छ । त्यस्तो साथी भेटिएपछि विवाह गर्ने हो । कोमार्फत जीवनसाथी खोज्ने भन्ने पनि छैन । आफन्त अथवा साथीभाइको सहयोग त अवश्य पनि चाहिन्छ नै । जरुरी पनि छ । उहाँहरूको साथ सल्लाह र सहयोगमा भेटिएकीसँग एक–अर्काको समर्थनमा नै विवाह हुन्छ ।
सामान्य परिवारको मिहिनेती व्यक्ति
मेरो घर साबिक थिदिंखा–५ पसलभञ्ज्याङ भोजपुर हो । अहिले थिदिंखा आमचोक गाउँपालिका–३ नम्बर वडामा पर्छ । बुवा जागिरमान राई र आमा राम्रीमाया राईको छोराका रूपमा ११ फागुन ०२७ सालमा जन्मेको हुँ । सामान्य किसान परिवारमा जन्मेर गाउँकै शिक्षाज्योति निमाविमा प्राथमिक शिक्षा पढेपछि सगरमाथा उमावि घोरेटारबाट एसएलसी गरेको हुँ । विद्यालयमा छँदा म एकदम इमानदार र मिहिनेती विद्यार्थीका रूपमा परिचित थिएँ । भलिबल राम्रो खेल्थेँ । भलिबल राम्रो खेल्ने हेन्सम खेलाडी भनेर मेरो चर्चा हुन्थ्यो ।
राजनीतिमा नलागेको भए ब्रिटिस आर्मी
धेरैले ब्रिटिस आर्मी हुन लायकको ज्यान छ भन्ने गर्थे । राजनीतिमा नलागेको भए सम्भवतः ब्रिटिस आर्मी हुन्थेँ होला । आफन्तले ब्रिटिस आर्मी हुनुपर्छ भन्ने खालको प्रेरणा दिन्थे । ‘तेरो ज्यान लाउरे हुन लायकको छ, लाउरे हुनुपर्छ है’ भन्दै आफन्तबाट दबाब आउँथ्यो । तर, आमाबुवाको एक्लो छोरो भएकाले लाहुर लागेर जाओस् भन्ने उहाँहरूको मनसाय थिएन । मेरो माइला मामा ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यसवेला भलिबल ल्याइदिनुभएपछि भलिबलप्रतिको मोह अझै बढेकोे थियो । स्कुलमा भलिबल खेलले चर्चित थिएँ । सबैले चिन्थे ।
यसरी सुरु भयो राजनीतिक यात्रा
एसएलसी गरेपछि म जिल्लाकै भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भएँ । क्याम्पसमा आएपछि खेलसँग बिस्तारै राजनीतिमा पनि लाग्न थालेँ । क्याम्पसमा भलिबल, टेबलटेनिस राम्रो खेल्थेँ । ०४६ सालमा भएको भलिबल प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी भएको थिएँ । शालीन व्यवहार भएको व्यक्ति हुँ । सम्भवतः मेरो व्यवहारले रुष्ट भएका साथी छैनन् अहिलेसम्म । ०४४ सालदेखि नै अनेरास्ववियुमा क्रियाशील हुन थालेको थिएँ । त्यसपछि खेल, पढाइ र राजनीतिलाई समान रूपले अगाडि बढाउँदै लगेँ । त्यसवेलाको राजनीतिक जीवन एकदम अप्ठ्यारो थियो । कालो, कठोर पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा लागेको हुँ । एकदमै गाह्रो अवस्थामा राजनीतिमा होमिन पुगेको थिएँ । ०४४ देखि ०४६ चैत २६ सम्म ‘निछाक’ उपनामबाट राजनीतिमा सक्रिय रहेँ । मानविकी संकायबाट स्नातकसम्मको शिक्षा भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसबाट लिएँ । यसबीचमा धेरै साथीसँग राजनीतिक सहकार्य गर्यौँ । त्यसयता मैले पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छु ।
०४७ मा एमालेको संगठित सदस्यता प्राप्त गरेँ । त्यसपछि ०४९ र ०५० मा अनेरास्ववियु भोजपुर जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरँे । ०४९ मा नै एमाले भोजपुरको जिल्ला कमिटी सदस्य भएको थिएँ । त्यसैगरी ०५० र ०५३ मा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य र पूर्वाञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेँ । ०५१ मा दोस्रो जिल्ला अधिवेशनबाट सचिवालय सदस्य भएँ । ०५४ मा जिल्ला कमिटीको उपसचिव भएँ । पार्टी विभाजन भएर धेरै साथी मालेतिर लाग्नुभयो । त्यसपश्चात् सचिवको जिम्मेवारी पाएँ । मैले चार कार्यकाल एमालेको जिल्ला अध्यक्ष (०५४–०७०) को रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेँ ।
सबैभन्दा कम उमेरमा संसद् प्रवेश
०५६ मा आएर मेरो संसदीय यात्रा सुरु भयो । ०५६ को आमनिर्वाचनमा भोजपुर क्षेत्र नं. २ बाट विजयी भई सबैभन्दा कम उमेरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य (कान्छो सांसद) बन्न सफल भएँ । ०७० वैशाख २७ गते एमाले वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएँ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भोजपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट पुनः निर्वाचित भएको थिएँ । ०७२ कात्तिक १९ मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएँ । सञ्चारमन्त्रीको भूमिकापछि २० महिनापछि प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री भएको छु । त्यस्तै, ०७१ मा एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भई हाल वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य एवं प्रदेश नं. १ सहइन्चार्जको रूपमा रहेको छु ।
जनतालाई धोका दिन्नँ
मैले पाटन क्याम्पस ललितपुरबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको छु । राजनीतिक व्यस्तताका कारण नियमित क्याम्पस जान नसकेपछि स्वअध्ययन गरेर नै पास गर्न सफल भएँ । यसरी मेरो विद्यार्थीजीवन फर्केर हेर्दा एकदम फलदायी नै रह्यो भन्ने लाग्छ । राजनीतिकजीवन अवश्य पनि सहज थिएन । विभिन्न बाधा–अवरोधहरू आए । तर, म कत्ति पनि विचलित नभई समस्याको निकास खोज्दै यहाँसम्म आउन सफल भएको छु । त्यो मैले देश र जनताका लागि गरेको प्रण हो । मेरो पढाइ, खेल र राजनीतिलाई केही समयसम्म मिलाएर नै अगाडि बढाएको थिएँ । केही समयपछि राजनीतिक जिम्मेवारीहरू बढ्दै गएपछि खेलजीवनलाई विश्राम लगाएँ । तर, मलाई दुःख लागेको छैन । एक व्यक्तिले धेरै इच्छा र चाहनालाई सँगै अगाडि बढाउन सक्दैन । राजनीतिमा लागेकाले जनता र समाजका लागि काम गर्ने उद्देश्य लिएर हिँडेको व्यक्तिले अतिरिक्त काममा कमै समय दिन पाइन्छ ।
जन्मेपछि आफ्ना लागि मात्र नभएर देश, जनता र समाजका लागि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने दृढसंकल्पले आज यहाँ छु । मैले गरेको संकल्पलाई जनताले विश्वास गरेर जिताउनुभयो, यसप्रति आभारी छु । जनताले मलाई गर्नुभएको विश्वास र साथलाई धोका दिनेछैन । उहाँहरूको विश्वासलाई व्यवहारमा देखाउन लागिरहेको छु ।
जनताको विश्वासलाई मर्न दिन्नँ
चर्चित एमाले युवानेता शेरधन राईले भर्खरै मात्र प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनी विद्यार्थी जीवनदेखि निरन्तर एमाले राजनीतिमा सक्रिय छन् । शालीन र इमानदार राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित छन् । भोजपुरको विकट गाउँको सामान्य परिवारमा जन्मेका राईको राजनीतिक चढाव तीव्र गतिमा भयो । पृष्ठभूमिका आधारमा पनि उनी आफूलाई सफल व्यक्तिका रूपमा लिन्छन् । भन्छन्, ‘मैले सानै उमेरदेखि राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पाउँदै आएको छु । जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्दै आएको छु । यस अर्थमा सफल व्यक्ति हुँ भन्ने लाग्छ ।’ पार्टीले समेत आफ्नो योगदानको कदर गरेकामा राई खुसी छन् । ४७ वर्षीय राई हालसम्म अविवाहित छन् । उनको विवाहको विषयमा वेला–वेला चर्चा भइरहन्छ । केही समयअघि मात्र ‘मुख्यमन्त्री भएपछि विवाह गर्छु’ भनेर अन्तर्वार्ता दिएपछि अहिले उनले कहिले विवाह गर्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
मेरो जीवनसाथीमा हुनुपर्ने गुण राजनीति बुझेको
आज म जे छु त्यो सबै राजनीतिले गर्दा छु । त्यसैले मैले बिहे गर्ने महिलाले राजनीति बुझेको हुनुपर्छ । मेरो पेसाप्रति जानकार भएको हुनुपर्छ । मेरो जीवन राजनीतिप्रति समर्पित भएको हुँदा मेरो क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने हुनुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक गतिशीलता, सामाजिक विविधतालाई बुझेको हुनुपर्छ । आफू बसेको समाज बुझेर त्यहीअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
गल्ती सुधार्ने तत्परता भएको
विवाह भनेको सम्झौता पनि हो, त्यसैले एकदम व्यावहारिक हुनुपर्छ । जीवनलाई अगाडि बढाउन एक–अर्काको चाहना बुझ्ने र सम्झौता गर्न सक्ने हुनुपर्छ । मेरो बुझाइमा दाम्पत्य जीवन सफल बनाउन एक–अर्कामा इमानदार र समर्पित हुनुपर्छ । जीवनलाई सहज बनाउने खुबी भएको हुनुपर्छ । सबैबाट गल्ती हुन्छ, गल्ती गरिसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने र सुधार गर्ने तत्परता हुनुपर्छ । मेरो भावना बुझ्ने र सम्मान गर्ने हुनुपर्छ ।
फरक विचारको पनि चल्छ
म कम्युनिस्ट विचार भएको भनेर सर्वविदितै छ । तर, कम्युनिस्ट भएपछि मैले विवाह गर्ने महिला मेरै विचारधारा भएको हुनुपर्छ भन्ने छैन । जुनसुकै विचार भएको हुन सक्छ । तर, त्यो फरक विचार जीवन चलाउने शैली र घरायसी व्यावहारिकतामा फरक हुन भएन । भए पनि सम्झौता गर्न सक्ने हुनुपर्छ । कहिले मबाट सम्झौता होला त कहिले उनीबाट । म आफ्नो विचार र सिद्धान्तशैलीले समाज र जोकोही व्यक्तिलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ । त्यसैले मैले रोज्ने महिला फरक राजनीतिक विचारधारा भएको पनि हुन सक्छ ।
केटी त जात मिल्ने नै चाहिन्छ
म आफू कम्युनिस्ट विचारधारा भएको व्यक्ति हुँ । त्यसैले गर्दा पनि जात, धर्मलाई आधार बनाएर विवाह गर्ने सोच पटक्कै छैन । तर, म आमाबुवाको एक्लो छोरा भएकाले अन्तर्जातीय विवाह उहाँहरूलाई स्विकार्य छैन । उहाँहरूको चाहना मैले विवाह गर्नु मात्र होइन, आफ्नै जातको बुहारी भित्रयाउने पनि हो । अब मैले अन्य जातको विवाह गरेर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने समय छैन । त्यसप्रति पनि म सचेत हुनुपर्छ । म राई हुँ । हाम्रो किराती संस्कारमा अन्तर्जातीय विवाह गर्दा कुलमा गइँदैन । हाम्रो राईहरूको तीन चुला हुन्छ (जसलाई थरअनुसार नाम दिइन्छ) । बुहारी भित्रयाउँदा तीन चुलामा लगाइन्छ । त्यसपछि मात्र घरको सदस्यका रूपमा मान्यता दिइन्छ । त्यसैले मैले आमाबुवाका लागि जातभित्रकी बुहारी भित्रयाउनुपर्ने बाध्यता छ । उहाँहरूको चुलामा पस्ने बुहारी ल्यायोस् भन्ने भित्री चाहना छ । उहाँहरूको इच्छा, चाहना पूरा गर्ने मेरो कर्तव्य ठानेर चुलामा भित्रयाउन मिल्ने नै विवाह गर्छु । राई र लिम्बूमध्येमा जुन पनि थर भएको हुन सक्छ ।
कम पढेको भए पनि स्मार्ट होस्
मैले विवाह गर्ने महिला यति नै र यही विषय पढेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । जुनसुकै विषय वा सामान्य पढेको पनि हुन सक्छ । सामान्य पढेको भए पनि समय र परिस्थितिलाई बुझेर सम्हाल्न र चल्न सक्ने हुनुपर्छ । पढाइ महत्वपूर्ण हो, तर धेरै पढेका मात्रै क्षमतावान् र स्मार्ट हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । आदर, सम्मान, माया गर्न जान्ने हुनुपर्छ ।
आधुनिक समाज बुझेको र परम्पराको ख्याल गर्ने हुनुपर्छ
समय एकदमै गतिशील छ भन्ने चेत भएको हुनुपर्छ । आधुनिक समाज बुझेको हुनुपर्छ । परम्परागत कुराको ख्याल गर्ने पनि हुनुपर्छ । स्थान र परिस्थितिलाई ध्यान दिएर आफूलाई प्रस्तुुत गर्न सक्नुपर्छ ।
पहिरनमा समाजको ख्याल गरोस्
पहिरनप्रति मेरो त्यस्तो केही बाध्यता हुन्न । आजभोलि जोकोही फेसन कन्सस भएका हुन्छन् । कस्तो ठाउँमा, कस्तो पहिरन लगाउने भन्ने चेत भएका हुन्छन् । सर्ट, पाइन्ट वा साडी नै लगाउनुपर्छ भन्दिनँ । आफूलाई सहज हुने पहिरन लगाउँदा मलाई फरक पर्दैन । पहिरन लगाउँदा समाजलाई ख्याल गर्ने हुनुपर्छ ।
कालो–गारो जस्तो भए पनि व्यवहार राम्रो
मलाई मान्छेको शारीरिक बनावटले फरक पार्दैन । व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ । शारीरिक बनावटले मान्छेको व्यक्तित्व जज गर्न मिल्दैन । म त्यो गर्दिनँ पनि । मोटो वा दुब्लो जस्तो पनि हुन सक्छ । अथवा कालो, गोरोजस्ता कुरा पनि गौण विषय हुन् । मुख्य त व्यवहार नै हो ।
हाइट जोडी मिल्ने होस्
सबै मान्छे आफ्नै ठाउँमा सुन्दर हुन्छन् । त्यसलाई झनै सुन्दर बनाउने भनेको मानवीय व्यवहारले हो । त्यसमा पनि झन् नारीलाई त सुन्दरताको प्रतीक नै मानिन्छ । त्यसैले यस्तो वा उस्तोभन्दा पनि देख्दा कस्तो मिलेको जोडी हो भन्ने सबैलाई भान होस् । हाइटको कुरा गर्नुपर्दा ठिक्कको होस् । सबैले जोडी मिलेको छ भन्नेसम्मको होस् भन्ने लाग्छ ।